Ụgbọ elu Prototype dara na Russia wee gbuo mmadụ niile nọ n'ụgbọ ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Ụgbọ elu Prototype dara na Russia wee gbuo mmadụ niile nọ n'ụgbọ ahụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu ahụ furu efu ebe ọ ga -agbada site na kilomita 1.5 (0.9 kilomita) wee gbawaa mgbe ya na ala dara.
Ụgbọ elu dara na nso Moscow.
Ụgbọ elu ụgbọ elu ndị agha Russia ọhụrụ na -ere ọkụ wee daa na ụgbọ elu mbụ ya.
Ọ nweghị ndị nwụrụ anwụ n'ihe mberede ụgbọelu Moscow.
Ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ nke Russia adaala n'oge ule nnwale ka ọ na -anwa ịgbada na ọdụ ụgbọ elu Kubinka dị na mpụga Moscow, wee gbuo mmadụ atọ nọ n'ụgbọ ahụ.
Ụgbọ elu ahụ furu ụzọ ụgbọ elu ya site na kilomita 1.5 (0.9 kilomita) wee gbawaa mgbe ya na ala dara.
Dị ka data mbido si kwuo, ihe mberede a kpatara ọkụ n'ọkụ njin aka nri nke ụgbọelu ahụ.
Onye nrụpụta ụgbọ elu ahụ, United Aircraft Corporation, kwadoro ihe mberede ahụ, na-ekwu na tupu ụgbọ elu prototype ahụ adaa, injin ụgbọ elu nke aka nri gbara ọkụ, nke mere ka Il-112V tụgharịa n'akụkụ aka nri. Ụgbọ elu ahụ bidoro gbafuo ọsọ ọsọ tupu ọ tụgharịa tụda ma daa n'ala dị nso Igwe ikuku Kubinka.
United Aircraft Corporation (UAC) kwuru na onye isi ọkwọ ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu Ilyushin, onye na-anya ụgbọ elu klas nke mbụ, dike nke Russia Nikolai Kuimov, onye na-anya ule nke klas nke mbụ Dmitry Komarov na onye injin ụgbọ elu ule klas nke mbụ Nikolai Khludeyev .
Rostec, ụlọ ọrụ nne na nna nke United Aircraft Corporation, mara ọkwa na ọ ga -emepụta kọmiti nyocha ihe mberede ahụ, na -achọpụta na ọ ka nọ na nyocha ya.
Dị ka otu onye na-ahụ maka ndị mmanye iwu siri kwuo, ahụtala ozu mmadụ atọ n'ime ndị ọrụ ụgbọelu Ilyushin Il-112V kacha ọhụrụ na Russia.
Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọ elu kwuru na ndị ọrụ ụgbọ mmiri lyushin Il-112V na-anwa ịzọpụta ụgbọ elu ahụ ruo oge ikpeazụ wee chụpụ ụgbọ elu ahụ n'ụlọ ndị mmadụ bi.